Ajụjụ - Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd.
Kedu ụdị ngwaahịa magneti anyị nwere ike inweta site na Meiko Magnetics?
Meiko Igwe Ọdụdọbụ ọkachamara na-eduga magnetik ngwaahịa emeputa & ekspootu na China. Ngwaahịa anyị sitere na bared neodymium magnets metụtara njikọ magnetik n'ụdị dị iche iche, ọrụ na ngwa. Ihe karịrị ụdị 2000 ihe magnetik bụ nhọrọ.
Kedụ maka njiri magnet gị?
Anyị na-agba mbọ na-enye elu-ruru eru magnetik ngwaahịa na Akwụkwọ ikike otu afọ, ewepu ihe ọ bụla na-emebi emebi ma na-emebi. Anyị na-akwado ihe anyị na ọrụ anyị. Nkwenye anyị bụ afọ ojuju gị na ihe magnetik anyị. Na ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nsogbu niile nke ndị ahịa na afọ ojuju onye ọ bụla.
Ọnụahịa anyị ga-agbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ndị ọzọ dị n'ahịa. Ma, ebe anyị si malite magnetik ngwaahịa manfacturer dabere na China, anyị nwere ike ịnye ọmarịcha asọmpi ọnụahịa maka ịchekwa ego gị.
Ee, anyị chọrọ iwu mba ụwa niile ka ịnwe nke kacha nta na-aga n’ihu. Ma ọ bụrụ na ọkọlọtọ size ihe na ngwaahịa, e nweghị MOQ maka mbụ iji. Maka nkọwa ndị ọzọ, biko nyere aka ịkpọtụrụ anyị.
Ee, anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere ule nyocha, Asambodo nke nyocha / mmekọrịta, Insurance, Origin, na akwụkwọ mbupụ ndị ọzọ achọrọ.
Nọmalị na 7-15 ụbọchị maka Mbupu. Ọ bụrụ n ’ọkọlọtọ, anyị nwere ike ịnapụta ha n’ime ụbọchị atọ. Maka ihe omuma ohuru, oge ndu bu ihe dika ubochi asaa. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nnwapụta ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafee ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.